5 Deeq waxbarasho oo ExxonMobil ah oo loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadda & Qalinjebinta Ardayda Nigerian ee 2022
5 ExxonMobil Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad & qalinjabinta ardayda reer Nigeria
Halkan, waxaad ka heli doontaa dhammaan faahfaahinta, oo ay ku jiraan dukumiintiyada loo baahan yahay iyo habka loo dalbado abaalmarinta deeqda waxbarasho ee NNPC & ExxonMobil. Deeqda waxbarasho ee lagu sharraxay qodobkan waxaa loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadeed iyo kuwa qalin jabiya ee Nigeria waxaana si wada jir ah u kafaala qaaday NNPC iyo ExxonMobil.
Deeqda waxbarasho waxaa loogu talagalay inay siiso taageero maaliyadeed waxbarasho ardayda. Badanaa waxaa la siiyaa ardayda heerka sare leh ee leh baahiyo dhaqaale si loogu dhiirrigeliyo inay si adag uga shaqeeyaan waxbarashadooda. In kasta oo ay jirto xaaladaha mudnaanta deeqda waxbarasho, asalka dhaqaale ee ardayga badiyaa lama tixgeliyo.
The Nigerian ExxonMobil deeq waxbarasho ayaa si isku mid ah loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo ardayda reer Nigeria ee shahaadada koowaad iyo kuwa qalin-jabiyay ee aqoonta leh. Dhammaan deeqaha waxbarasho waxaa lagu bixiyaa oo keliya iyadoo lagu saleynayo mudnaanta.
Deeqda waxbarasho ee shahaadada koowaad waxay u furan tahay codsiyada ardayda reer Nigeria ee ku jira barnaamijka shahaadada koowaad ee mid ka mid ah anshaxyada hoos ku qoran;
Waxaad ubaahantahay inaad horeyba u noqotid arday shahaadada koowaad kaqaata noocyadan cilmiga ah (waxbadan ayaa lagu dari karaa mustaqbalka sidaa darteed had iyo jeer weydii su'aalaha kahor dalabka) si aad u awoodo inaad dalbato deeqda waxbarasho ee Exxon-Mobil oo ah arday reer Nigeria ah.
Waa maxay ExxonMobil?
Sida lagu sheegay bogga rasmiga ah ee ExxonMobil, “ExxonMobil waa mid ka mid ah shirkadaha bixiya tamarta dadweynaha ee adduunka ugu weyn iyo soosaarka kiimikada si loo horumariyo loona dabaqo tikniyoolajiyadda jiilka soo socda si looga caawiyo nabadgelyo iyo masuuliyad buuxinta baahiyaha sii kordhaya ee adduunka ee tamarta iyo alaabada kiimikada oo tayo sare leh. ”
Shirkadda, ExxonMobil, waxay siisaa tiro deeqo deeqo ah ardayda jaamacadaha Nigeria si ay u kafaala qaadaan waxbarashadooda sare iyo sidoo kale tartamada tartamada ardayda dugsiyada hoose iyo kuwa sare oo ay ku guuleystaan ​​qiimo badan.
Isku soo wada duuboo, ExxonMobil kuma koobna oo kaliya adduunka tamarta laakiin sidoo kale wuxuu fidiyaa tabarucyadiisa ku aaddan caawinta iyo maalgelinta waxbarashada ardayda xagga maaddooyinka waaweyn ee gacan ka geysan doona horumarka dalka iyo adduunkaba.
Deeqda waxbarasho ee 'ExxonMobil MPN' oo keliya ayaa sanadkiiba la siiyaa 500 oo arday ah oo shahaadada koowaad ka qaata jaamacadaha Nigeria oo ku jira nooc kasta oo anshaxeed ee aan kor ku soo xusay waana inay ku codsadeen dukumiintiyada lagama maarmaanka ah iyo hababka dalabka ee aan sida saxda ah ugu sharraxay hoos.
Si kastaba ha noqotee, ardayda uqalma oo ku guuleysta deeqaha waxbarasho ee caalamiga ah ee ExxonMobil ayaa la maalgeliyaa hal sano inkasta oo tan dib loo cusbooneysiin karo haddii ardaygu sii wado waxqabadkooda tacliimeed ee wanaagsan iyo warbixinnada la xiriira ee ka socda machadka sida dhaqanka wanaagsan, si firfircoon uga qaybqaata hawlaha manhajka dheeriga ah , waxtarka wanaagsan ee edbintooda iyo wixii la mid ah.
Adiga oo ku guuleystey deeqda waxbarasho ee ExxonMobil oo aad la socotid bayaannada kor ku xusan waxaad dhammaystiri kartaa waxbarashadaada aasaasiga ah adigoon bixin kharashka waxbarashada.
Xirmo kale oo xiise leh oo la socota ku guuleysiga deeqda waxbarasho ee ExxonMobil waa adiga MAQAL dhab ahaantii waxay leeyihiin tallaal la shaqeynta ExxonMobil ama la-hawlgalayaasheeda kale sida NNPC (Shirkadda Qaranka ee Batroolka ee Nigerian), MPN (Mobil Producing Nigeria) iwm, kuwaas oo ah ururro waaweyn oo ka shaqeeya qaybta wax soo saarka tamarta ee Nigeria.
Laakiin, ogow inaad tahay qof abaal marin ka helay abaalmarinta deeqaha waxbarasho ee Exxon Mobil qasab kuma aha inaad u qalanto inaad shaqo ka hesho hay'adda markaad qalin jabineyso laakiin waa fursad weli jirta.
Immisa ayey u tahay deeqda waxbarasho ee ExxonMobil dadka reer Nigeria?
Qiyaasta saxda ah ama qiimaha deeqda waxbarasho si sax ah looma sheegin, kaliya waxaa la siiyaa sanadkiiba ardayda 500 ee shahaadada koowaad ee jaamacadeed oo leh daaqad hal sano ah laakiin waa la cusbooneysiin karaa sanadaha soo socda iyo haddii abaalmarinta la sii wado diiwaanka tacliinta ee wanaagsan oo ay fiicantahay edbinta.
Goorma ayaa deeqda waxbarasho ee ExxonMobil loogu talagalay dadka reer Nigeria bilaabmaya?
Deeqda waxbarasho ee 'NNPC Exxon-Mobil' sida caadiga ah waxay u furan tahay inay hesho codsiyo cusub bartamaha sanadka (inta udhaxeysa Juun iyo Julaay sanadkiiba).
Goorma ayey tahay waqtiga kama dambaysta ah ee deeqda waxbarasho ee ExxonMobil?
Codsiga deeqda waxbarasho ee 'NNPC cum Exxon-Mobil' wuxuu badiyaa dhammaadaa Ogosto sannadle ah.
Aaway ExxonMobil oo ku yaalo Nigeria?
ExxonMobil waxay ku taalaa meelo badan oo ka tirsan Nigeria iyada oo leh ilaa iyo toddobo xafiis oo waaweyn. Iyaga oo leh laba xafiis oo ku yaal Lagos State si sax ah Victoria Island iyo Apapa, laba kale oo ku yaal Gobolka Rivers oo ku yaal Terminalka Badweynta Federaalka, Onne iyo Terminal Bonny.
Laba Akwa Ibom at Uyo iyo Qua Iboe Terminal ka dibna ugu dambeyntii, mid ka mid ah Abuja.
Deeqda waxbarasho ee ExxonMobil ma la mid tahay tan deeqda waxbarasho ee Mobil?
Exxon Corporation iyo Mobil corporation waa iskudhaf, sidaas darteed waxay qabtaan hal hawl sidoo kale deeqaha waxbarasho sidoo kale. Marka deeqda waxbarasho ee ExxonMobil waxay la mid tahay deeqda waxbarasho ee Mobil.
Deeqaha NNPC Exxon-Mobil
Waxaa jira barnaamijyo deeqo waxbarasho 3 ah iyo 2 barnaamijyo kedis ah oo ay si wada jir ah u maalgeliyaan NNPC iyo ExxonMobil guud ahaan Nigeria oo loogu talagalay ardayda reer Nigeria ee heerar kala duwan laga bilaabo dugsiga hoose ilaa dugsiga sare iyo illaa heer jaamacadeed. Hoos waxaa ku qoran abaalmarintan;
Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee MPN
Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee EEPNL (Maxalli iyo caalami ah)
NNPC / MPN / STAN Kediska Qaranka
Tartanka Sayniska Sayniska ee gobolka Akwa Ibom
Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee ExxonMobil MPN
Mobil soosaarka Nigeria, Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee MPN oo ay si wada jir ah u maalgaliyaan ExxonMobil iyo Hay'ada Qaranka ee Batroolka ee Nigerian (NNPC) ayaa abaalmarin siisa 500 oo deeq waxbarasho ah sanadkiiba mar si ay ardayda tacliinta sare ee reer Nigeria.
Barnaamijyada jaamacadeed ee injineernimada iyo cilmiga Geosciences waxay qaataan boqolkiiba 60 ee qoondaynta deeqda waxbarasho ee NNPC / MPN, halka boqolkiiba 40 loogu talagalay kuwa kale ee la ansixiyay ee ganacsiga iyo daraasadaha la xiriira cilmiga bulshada.
Inta badan abaalmarinta deeqda waxbarasho ee MPN waxay ka dhigtaa inay la shaqeyso Mobil Nigeria markay qalin jabiyaan jaamacada in kastoo aysan jirin wax damaanad ah in Mobil aqbali doono dhamaan dadka abaal marinta ah inay lashaqeeyaan.
Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee ExxonMobil EEPNL
Esso Exploration and Production Nigeria, Ltd oo kaashanaysa ExxonMobil waxay abaal marisay laba deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah oo kaladuwan oo loogu talagalay ardayda reer Nigeria.
ExxonMobil EEPNL Abaalmarinta Deeqda-waxbarasho ee Caalamiga ah ee qalin-jabinta
ExxonMobil EEPNL Abaalmarinta Deeqaha-Dibadeed ee Deegaanka
ExxonMobil iyo EEPNL abaalmarino deeqo waxbarasho oo u qalma $ 60,000 loogu talagalay barnaamijyada jaamacadeed ee hal sano ah iyo $ 80,000 muddo laba sano ah barnaamij dibloomo ah ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan dibadda.
10 ardayda qalin jabisa ayaa uqalma deeqdan waxbarasho sanadle ah Nigeria. Deeqdani badanaa waa hal sano oo waxbarashadeed mar la bixiyo laakiin waa la cusbooneysiin karaa si loo daboolo muddada daraasadda la oggol yahay (ee kuwa barnaamijkooda dibloomada ee dibedda ay qaadan doonaan in ka badan hal sano in la dhammaystiro).
Cusboonaysiinta waxay ku saleysan tahay waxqabadka akadeemiyadeed ee qaatayaasha iyo warbixinnada laxiriira hay'adaha sidaa darteed abaalmarinta waxaa laga filayaa inay ilaaliso diiwaanada tacliinta sare iyo akhlaaqda si ay awood ugu hesho dib u cusbooneysiinta deeqda waxbarasho sanad kadib.
Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee qalin-jabinta caalamiga ah ee ExxonMobil ayaa asal ahaan loogu talagalay oo keliya ardayda Nigerian ee ku takhasusay cilmiga Geosciences iyo Engineering. Codsadeyaasha guuleysta waa inay wax ka bartaan Mareykanka ama Boqortooyada Midowday.
Abaalmarinta ExxonMobil EEPNL ee abaalmarinta dib-u-qalinjabinta maxalliga ah waxaa loogu talagalay ardayda reer Nigeria ee doonaya inay ku qaataan barnaamijyada shahaadada jaamacadeed ee Nigeria sidoo kale. Waa barnaamij deeq waxbarasho oo tartan badan leh inkasta oo uusan u tartamin sida deeqda waxbarasho ee caalamiga ah ee 'EEPNL PG'.
Arday badan oo qalin jabisa ayaa loo xushaa deeqdan waxbarasho sanadle ah waxayna ku faaftaa meel ka baxsan oo kaliya cilmiga Geoscience iyo injineernimada oo aan ka duwanayn kan kale. Tani waa inay sii joogtaa in ardayda ka timaadda dhinacyada kale ee wax barashada labadan dhinac ay sidoo kale dalban karaan oo ku guuleysan karaan deeqda waxbarasho.
Deeqda ayaa la bilaabay 2007 waxaana la sii waday tan iyo markaas ilaa iyo haatan.
ExxonMobil NNPC / MPN / STAN Kediska Qaranka
Muddo dhowr sano ah, NNPC / Mobil Soo Saarista Wadashaqeyn Wadaag ah ee Nigeria (JV) wuxuu ahaa magaca kafaala qaadaha Tartanka Qaran ee Kediska iyo Mashaariicda, oo ay sanad walba abaabulaan Ururka Macallimiinta Sayniska ee Nigeria (STAN).
Tartankani waa mid dalka oo dhan ka furan wuxuuna u furan yahay ardayda dugsiga hoose iyo ardayda dugsiga sare ee Nigeria.
Tartanka Kediska Sayniska ExxonMobil ee gobolka Akwa Ibom
Tartan Aqooneedka Sayniska ee loo yaqaan 'Challenge Schools' ee gobolka Akwa Ibom waxaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo waxqabadka ardayda ee imtixaannada sayniska, iyo sidoo kale in lagu dhiirrigeliyo barashada / barashada sayniska ee dugsiyada sare ee gobolka oo dhan.
In kabadan 360 iskuulada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah ee Akwa Ibom ayaa gala sanadkan tartankan. Tiradani waxay kordhisay in ka badan 300 si loo barbardhigo markii ugu horreysay ee tartankan lagu qabto gobolka 2003 oo kaliya 62 iskuul ay ka qeyb qaadanayeen.
Sida loo Codsado Deeqda waxbarasho ee ExxonMobil ee ardayda dhigata shahaadada koowaad ee Nigerian
Ayaa dalban kara deeqda waxbarasho ee ExxonMobil ee Nigeria?
Waxay u muuqataa kaliya muwaadiniinta reer Nigeria laakiin taasi maahan waxa loo baahan yahay oo dhan si loo dalbado loona dhaafo deeqda waxbarasho ee ExxonMobil, waxaa jira shuruudo u qalmid gaar ah iyo dukumiintiyo codsadayaasha xiisaynaya ay tahay inay haystaan ​​hantidooda kahor codsashada abaalmarinta deeqda waxbarasho
U-qalmitaanka deeqda waxbarasho ee ExxonMobil waa sidan soo socota;
Codsadeyaashu waa inay dhammaystiraan waxbarashadda dugsiga sare ee dugsiga sare oo ay qoraan imtixaanka WASSCE ama wax u dhigma, sida GCE, NECO iwm, oo ay ugu yaraan lix maado ku gudbeen fadhi leh ugu yaraan 5 kala-duwanaansho.
Codsadeyaashu waa inay horeyba uga diiwaangashan yihiin jaamacad Nigerian ah oo la aqoonsan yahay oo ay muujiyaan caddeynteeda sida warqadda aqbalaadda JAMB ama dukumiinti kasta oo kale oo xaqiijinaya gelitaankooda jaamacadda.
Codsadeyaashu waa inay haystaan ​​kaarka aqoonsiga jaamacadda.
Codsadeyaashu waa inay ku jiraan sannaddooda koowaad ama labaad ee waxbarashadooda, oo ka diiwaangashan koorso sayniska oo waqti-buuxa ah.
Codsadeyaashu waa inay keenaan dukumiinti sannadka ay wax ku baranayaan
Haysashadaada dukumiintiga aqoonsiga gobolka asalka ah ee ay tahay inuu saxeexo gudoomiyaha ama xoghayaha dawladaada hoose.
Keen sawirrada baasaboorka hadda jira.
Musharixiinta liistada liis gareysan waxaa looga baahan yahay inay la yimaadaan labadaba asalka iyo nuqul dhammaan dukumiintiyada ku taxan, si loo baaro ka hor inta aan la qaadin imtixaanka u qalmidda.
Ha dalban haddii aad hadda ku jirto deeq waxbarasho oo la mid ah shirkad kale oo soo saarta saliidda iyo gaaska.
Marka, halkaas waxaad ku haysataa liiska waxa ay u baahan tahay si loo dalbado deeqda waxbarasho ee ExxonMobil. Codsiga waxaa lagu sameeyaa khadka tooska ah iyada oo loo marayo nidaamka codsiga deeqda waxbarasho ee khadka tooska ah ee ExxonMobil.
Faahfaahinta deeqaha waxbarasho
Gabagabo iyo Talooyin
Shuruudaha deeqda waxbarasho ee ExxonMobil iyo nidaamka arjiga ayaa lagu taxay qaybta "u-qalmitaanka" ee qodobkan oo bilaabaya dalabkaaga.
Deeqda waxbarasho ee 'ExxonMobil' waxay ka caawisaa dowladda federaalka ah ee Nigeria tababarka iyo horumarinta shaqaale heer sare ah iyo heer sare ah oo dalka ah iyada oo sidoo kale kor u qaadeysa isku-darka suurtagalka ah ee musharraxiinta loo shaqaaleeyo shirkadda.
Markaa furitaanka fursad yar oo fursad ah oo loogu talagalay deeqda waxbarasho ee ExxonMobil si loogu amro qaybta saliidda iyo gaaska.
Waa kuwan qaar ka mid ah qoraalladeenna oo waxtar kuu yeelan kara;
NNPC-Chevron Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Nigerian
Sida wax loogu barto dibadda iyadoo deeq waxbarasho laga helayo waddan kasta
37 Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo Ivy League ah oo leh Xiriirro Codsi Toos ah
Deeqaha Deegaanka Deeqaha Nigerian
deeqda waxbarasho ee exxonmobilDeeq waxbarashoDeeqda waxbarasho ee MPCdeeqaha waxbarasho ee jaamacadeed ee nigerianDeeqda waxbarasho ee NNPC
Previous Post:15 Yale Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay Ardayda iyo Xirfadleyda
Post Next:13 Koorsooyin Real Estate ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin